सवाल/जवाफ – १
लोकसेवा गाईड डट कमबाट के–के सुविधा पाईन्छ ?
जवाफ : लोकसेवा गाईड डट कममा निम्न सेवाहरु उपलब्ध छन् ।
क) सामान्यज्ञान निःशुल्क अध्ययन (Basic Package)
ख) सामान्यज्ञान निःशुल्क प्राक्टिस गर्ने सुविधा (Basic Package)
ग) पूरानो प्रश्नहरुको सग्रह तथा PDF Download
घ) लोकसेवा आयोगको पाठ्यक्रम अनुसार विभिन्न प्रश्नहरुको अध्ययन तथा प्राक्टिस गर्ने सुविधा (Career Update)
ङ) प्राक्टिस सेट Question डाउनलोड गरी अध्ययन गर्ने सुविधा
च) दैनिक समसामायिक घटना तथा सूचनाको संगालो (Career Update) डाउनलोड र अध्ययन सुविधा
छ) पाठ्यक्रम निःशुल्क अध्ययन
ज) विभिन्न लेखहरुको संगालो (Articles) निःशुल्क
सवाल/जवाफ – २
लोकसेवा गाईडमा सशुल्क सेवा लिनको लागि कति रकम लाग्छ कसरी थाहा पाउने ?
जवाफ : सशुल्क अध्ययन गर्नु पने सामग्रीका लागि सम्बन्धित प्याकेजमा नै रकम उल्लेख गरिएको छ ।
सवाल/जवाफ – ३
सशुल्क प्याकेजको शुल्क E-sewa मार्फत कसरी तिर्ने ?
जवाफ : यस्तो रकम E-sewa बाट तिर्नको लागि प्याकेजको लिष्टमा माथि पट्टी लेखिएको E-sewa को Button मा Click गर्ने त्यसपछि सबै Package हरुको लिष्ट नयाँ पेजमा देखिनेछ ।
आफूलाई चाहिएको प्याकेजको तल राखिएको Check Box  मा Tick गर्ने । त्यसपछि proceed to pay मा click गर्ने र E-sewa को निर्देशन अनुसार गरी प्याकेज किन्न सकिन्छ ।
सवाल/जवाफ – ४
एकै पटक एकभन्दा बढी प्याकेज खरिद गर्न सकिन्छ की सकिदैन ?
जवाफ : सकिन्छ, माथि सवाल ३ कै विधिबाट नै गर्न सकिन्छ । जम्मा गरिसकेको पश्चात त जम्मा गर्नेको नाम जम्मा गरेको बैक शाखा सहितको विवरण कम्पनीमा जानकारी गराउनु पर्छ ।
सवाल/जवाफ – ५
यो सेवा रकम तिरेको कति समय पछि Package Activate हुन्छ ?
जवाफ : E-sewa बाट रकम बुझाएको भएमा तुरुन्तै र अन्य माध्यमबाट बुझाएको भएमा कम्पनी कार्यालयमा जानकारी गराएको १० मिनेटभित्र सेवा Activate हुन्छ । तर पुस्तक पठाउनु पर्नेमा कुरियर सर्भिसमा निर्भर हुन्छ ।
सवाल/जवाफ – ६
E-sewa वा बैंक मार्फत रकम बुझाउन असमर्थ भएमा के गर्ने सकिन्छ ?
जवाफ : रेसमट्यान्स कम्पनी मार्फत पनि रकम पठाउन सकिन्छ । थप जानकारी आवश्यक परेमा ०१–४३५३३७६ मा फोन गर्न सकिन्छ । एक भन्दा बढी प्याकेज खरिद गर्ने सबै Package मा Tick गर्नु पर्छ ।
सवाल/जवाफ – ७
एकपटक शुल्क तिरे पश्चात कति समयसम्मको लागि याे सेवा लिन सकिन्छ ?
जवाफ : यो प्याकेजको प्रकार अनुसार हुन्छ । जस्ताे Premium प्याकेजकाे हकमा ६ महिना, Premium Plus Package काे हकमा १ बर्षसम्म सेवा लिन सकिन्छ । तर Career Update Premium Plus काे हकमा ३ बर्षसम्म सेवा लिन सकिन्छ ।
सवाल/जवाफ – ८
लोकसेवा गाईड डट कमको सामग्री कति कति समयमा Update हुन्छ ?
जवाफ : यो सामग्री यिमित रुपमा नै Update हुन्छ । हालको व्यवस्था अनुसार Premium Package का लागि छ महिना र Premium Plus का लागि १ वर्ष छ । तर करीयर अपडेट (Career Update) Premium & Premium Plus को हकमा Daily Update हुन्छ ।
सबाल/जवाफ – ९
लोकसेवा गाईड डट कममा कसरी रजिष्टर गर्ने ?
जवाफ : लोकसेवा गाईड डट कम (www.loksewaguide.com) खोले पश्चात दायाँ माथि कर्नरमा रहेको Login/Register Button मा click गरे पश्चात login or register page आउँछ । त्यसमा Register Button Click गरेपछि विभिन्न विवरण जस्तो नाम, ठेगाना, मोबाइल नंम्बर भर्ने पेजमा सोही बमोजिमको विवरण भरी submit गर्नुहोस् । अब तपाई आफ्नो इमेल हेर्नुहोस् । त्यहाँ एक लिंक आएको हुनुपर्छ । सो लिंकमा click अब रजिष्ट्रेसन प्रोसेस सकिएको छ । आफ्नो username र password प्रयोग गरेर लोकसेवा गाईड डटकमको सेवा लिन सक्नु हुनेछ । यदि यो सब प्रक्रिया पूरा गर्न असमर्थ हुनु भयो भने ९८०३५१०६५५ वा ०१–४३५३३७६ वा हाम्रो फेसबुक पेजमार्फत इमेल नाम र मोबाईल नं. टिपाउनुस हामी तुरुन्त रजिष्टर गरी username र पासवर्ड sms गरिदिनेछौं ।